यस्ता छन् विश्वका उत्कृष्ट फोटो, तपाईँलाई कुन फोटो राम्रो लाग्यो? – MySansar
यस्ता छन् विश्वका उत्कृष्ट फोटो, तपाईँलाई कुन फोटो राम्रो लाग्यो?
Posted on February 23, 2015 February 23, 2015 by Salokya
यो वर्षका उत्कृष्ट फोटोहरुको घोषणा केही दिन अघि भएको छ। फोटो पत्रकारितामा रुचि भएको हुँदा यसबारे ब्लग लेख्नका लागि आयोजकबाट फोटो मागेको थिएँ। त्यहाँबाट प्राप्त फोटोहरुमध्ये केही फोटो हेरेर, तिनको क्याप्सन पढेर कुन फोटो कस्तो बारे थोरै लेखेको छु। तपाईँलाई कुन फोटो राम्रो लाग्यो, कमेन्टमा लेख्नुस् है त। यी फोटोहरु १३१ देशका ५ हजार ६९२ फोटोग्राफरका झण्डै ९८ हजार फोटोहरुबाट छानिएका हुन्। नेपालबाट पनि अंगद ढकाल, नवीन बराल, उमा विष्ट, विजय गजमेर, विकास कार्की, बीबी फुयाँल, किशोर शर्मा, हेमन्तकुमार श्रेष्ठ, नरेश श्रेष्ठ र दीपक तोलाङ्गेले फोटो पठाएका थिए (सबै सहभागीको नाम हेर्न क्लिक गर्नुस्) तर नेपाली फोटोग्राफरका फोटोले भने कुनै पनि पुरस्कार जित्न सकेन।
स्पट न्युज क्याटेगोरीको स्टोरिजतर्फ दोस्रो पुरस्कार जितेको यो फोटो फ्रान्सका Jérôme Sessini ले Magnum Photos for De Standaard का लागि खिचेका हुन्। फोटो युक्रेनको किभमा आफ्ना साथीलाई गोली लागेपछि चिकित्सा सहयोगकालागि बोलाउँदै गर्दाको हो।
नेचर क्याटेगोरीतर्फ स्टोरिजको पहिलो पुरस्कार जित्न सफल यो फोटो अमेरिकाका आनन्द वर्माले National Geographic Magazine का लागि खिचेका हुन्। कमिला देखिन्छ यसमा। यार्सागुम्बा जस्तै प्रजातिको ढुसी कमिलामा उम्रेको बेलाको फोटो हो यो। यार्सा, चाहीँ किरामा उम्रन्छ। ४०० भन्दा बढि प्रजातिका यस्ता ढुसीहरुले विभिन्न होस्टहरुलाई जस्तै कमिला, किरा आदीलाई आक्रमण गर्छन्।
पोट्रेट क्याटेगोरी तर्फ स्टोरिजको तेस्रो पुरस्कार जितेको यो फोटो इटालीका Paolo Verzone ले Agence Vu का लागि खिचेका हुन्। नेदरल्यान्ड्सको एउटा सैनिक एकेडेमीमा क्याडेटको फोटो हो यो। फोटो सामान्य जस्तै लागे पनि युरोपको एउटा प्रमुख सैन्य एकेडेमीको भएर यसले महत्व पाएको हो।
कन्टेम्पोररी इस्युजको स्टोरिजतर्फ तेस्रो पुरस्कार जितेको यो फोटो बेल्जियमका Tomas van Houtryve ले VII for Harper’s Magazine का लागि खिचेका हुन्। फोटो क्यालिफोर्नियामा खिचिएको हो। विद्यार्थीहरु स्कूलको मैदानमा देखिएका छन्। त्यति भन्दैमा यो फोटोको कथा सकिँदैन। सन् २००४ यता अमेरिकाको गोप्य ड्रोन आक्रमणमा हजारौँको मृत्यु भएको छ। फोटोग्राफरले आफ्नै ड्रोन बनाएर त्यसमा क्यामेरा फिट गरी अमेरिकाका विभिन्न ठाउँमा पाकिस्तान र यमनमा अमेरिकी ड्रोन उडाए जस्तै गरी उडाएर हेरेका हुन्। त्यसै क्रममा यो स्कूलको मैदानको फोटो खिचिएको हो।
जनरल न्युज क्याटेगोरीको सिङ्गलतर्फ दोस्रो पुरस्कार जितेको यो फोटो इटालीका Massimo Sestini ले खिचेका हुन्। इटालीको जलसैनिकले जहाजका यात्रुको उद्दार गर्दै लाँदै गर्दाको फोटो हो यो।
स्पोर्टस् क्याटेगोरीको सिङ्गल्सतर्फ पहिलो पुरस्कार जितेको यो फोटो मलाई चैँ सबैभन्दा राम्रो लाग्यो। फोटो चीनमा Bao Tailiang ले Chengdu Economic Dailyका लागि खिचेका हुन्। अर्जेन्टिनी खेलाडी मेस्सीले आफ्नो टिम जर्मनीसँग हारेपछि आफ्नो हुन नसकेको विश्व कप तिर सून्य भावले हेरेको यो दृश्य मनै छुने खालको छैन त ?
जनरल न्युज क्याटेगोरीको स्टोरिजतर्फ पहिलो पुरस्कार जितेको यो फोटो अमेरिकाका Pete Muller ले Prime for National Geographic / The Washington Post का लागि खिचेका हुन्। यो सियरा लियोनको फ्रि टाउनमा खिचिएको फोटो हो। इबोला रोग लागेका एक रोगी उनलाई अलग्गै राखिएको वार्डबाट भाग्न खोज्दा फेरि समातेर ल्याउँदै गर्दाको फोटो रहेछ यो। यो फोटो खिचेको केही समयमा नै रोगीको मृत्यु भएछ।
स्पोर्टस क्याटेगोरीको सिङ्गल्सतर्फ दोस्रो पुरस्कार जितेको यो फोटो अमेरिकाका Al Bello ले Getty Images का लागि खिचेका हुन्।
नेचर क्याटेगोरीमा सिङ्गल्सतर्फ दोस्रो पुरस्कार जितेको यो फोटो अमेरिकाकी Ami Vitale ले National Geographic का लागि केन्यामा खिचेका हुन्। केन्याका साम्बुरुहरुले पहिलो पटक गैँडा भेट्दा छाम्दै गरेको फोटो हो यो।
नेचर क्याटेगोरीको सिङ्गल्समा पहिलो पुरस्कार जितेको यो फोटो चिनियाँ फोटोग्राफर Yongzhi Chu ले खिचेका हुन्। यो फोटोमा बाँदर डराएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। आन्हुई प्रान्तमा सर्कस सञ्चालकले बाँदरलाई ट्रेनिङ दिँदै गर्दा पिट्न लागेको बेला खिचेको फोटो हो यो।
स्पट न्युज क्याटेगोरीको सिङ्गल्समा पहिलो पुरस्कार जितेको यो फोटो टर्कीका Bulent Kilic ले Agence France-Presse का लागि खिचेका हुन्। इस्तानबुलमा मार्च १२, २०१४ मा सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा मारिएका १५ वर्यीय किशोरको अन्त्येष्टिपछि दंगा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा घाइते भएकी किशोरीको फोटो हो यो।
हेर्दा यो फोटो पनि सामान्य नै देखिन्छ। यस्तो फोटो त मै खिच्छु जस्तो पनि लाग्दो हो तपाईँलाई। फोटोभन्दा पनि त्यसको पछाडि रहेको कथाका लागि यसले जनरल न्युज क्याटेगोरीको स्टोरिजमा दोस्रो पुरस्कार जितेको हो। अमेरिकाकी Glenna Gordon नाइजेरियाको अबुजामा यो फोटो खिचेका हुन्। यो फोटोको क्याप्सन हो- हराइरहेकी तीन बालिकाको स्कूल युनिफर्म। कथाको क्याप्सन भने यस्तो छ : आफ्नो स्कूल नोटबुकमा Hauwa Nkeki ले आफ्ना दाजुलाई लेखेकी छिन्, ‘प्रिय दाजु, तपाईँलाई लाखौँ शुभकामना, तपाईँका साथीलाई हजारौँ शुभकामना, तपाईँका शत्रुलाई सून्य शुभकामना।’
इस्लामिक लडाकु संगठन बोको हरामले उत्तरी नाइजेरियाको एउटा दुर्गम गाउँबाट अपहरण गरेका तीन सय स्कूले बालिकामध्ये हाउवा एक थिइन्। बोको हराम नामलाई अनुवाद गर्दा पश्चिमी शिक्षा पापी हो भन्ने हुन आउँछ। यो समूहले बालिकाहरुलाई स्कूलमा पठाउन नहुने र केटाहरुले मात्र कुरान पढ्नुपर्ने विश्वास गर्छ।
केही वर्षदेखि नै बोको हरामले गाउँ जलाउने, आफ्नो सेनामा भर्ती गराउन जबर्जस्ती लैजाने गरिरहेका थिए। तर यी बालिकाहरु अपहरण गर्नुअघिसम्म कसैले ध्यान दिएका थिएनन्। मे २०१४ मा अपहरण भएपछि विश्वभर नै यो खबर फैलियो। मिडियामा यसको विरोधमा भएका प्रदर्शनहरुको पनि निकै समाचार आयो। तर यो कभरेजमा केही मिस भएको थियो भने त्यो थियो तिनै बालिकाहरु।
[आयोजकले यति फोटो मात्र माइसंसारलाई प्रकाशन गर्न अनुमति दिएको छ। पुरस्कृत बाँकी फोटोहरु तपाईँ यहाँ क्लिक गरी हेर्न सक्नुहुन्छ]
तपाईँलाई कुन फोटो राम्रो लाग्यो त ? तल कमेन्टमा लेख्नुस् है।
5 thoughts on “यस्ता छन् विश्वका उत्कृष्ट फोटो, तपाईँलाई कुन फोटो राम्रो लाग्यो?”
“मेस्सी’कै फोटोमा स्टोरी छ. इबोला’को अर्को कथा र ३- बादर’को| अरु त सालोक्य अनि अरु जजका भाव हुन्! कथा हुन्, तस्बिर होइनन! हामी/अरु लाई कथा व्याखा होइन फोटो र रंग चाहिएको हो |”
अमन गाैतम says:
नेपाली सहभागीहरूकाे फाेटाेहरूले पुरस्कार नजितेपनि यहाँ राखिदिएकाे भए हेर्न रमाइलाे हुन्थ्याे । मलाइ पनि मेस्सीकाे फाेटाे मन पर्याे ।
Circus and monkey is heartaching…actually it shows cruel face of human.
The fear in the face of ebola sufferer—-is also sad
सर्कस मा बाँदर लै कुट्न खोजेको फोटो ले मन चसक्क पर्यो |
म लाइ पनि मेस्सिको कुडिएको मन भएको फोटो नै मन पर्यो | थ्रिल्लर फोटो चै त्यो इबोला लागेको काले को फोटो लाग्यो |